Uninzi lwezigqibo zokuThenga kwi-B2B zenzeka ngaphambi koNxibelelwano neNkampani yakho | Martech Zone
Ngeli xesha elinye ishishini linxibelelana neshishini lakho ukuthenga imveliso okanye inkonzo yakho, base Isibini kwisithathu ukuya kwiipesenti ezingama-90 zohambo lwabo lokuthenga. Ngaphezulu kwesiqingatha sabo bonke abathengi be-B2B baqala inkqubo yokukhetha umthengisi wabo olandelayo ngokwenza uphando olungekho sesikweni malunga nemiceli mngeni enxulumene nengxaki abayiphandayo.
Le yinyani yelizwe esiphila kulo! Abathengi be-B2B abanamonde okanye ixesha lokulinda abameli bakho abathengisayo ukuba bazise imveliso okanye inkonzo yabo kubo. Sele beyazi ingxaki kwaye sele bephanda isisombululo. Iqela lakho kufuneka livelise umxholo wokuxhasa kunye nokwakha igunya kwimidiya yoluntu kunye neziphumo zokukhangela ukuze ubabambe kwangoko kumanqanaba ophando. Ou
Ukuthengiswa kwe-B2B kunokuba nzima, kwaye ukuba ufana neenkampani ezininzi phaya, ujikelezisa iivili zakho uzama ukuthengisa kwintengiso ngeendlela zesiko eziphumayo njengokufowuna okubandayo, ukuthengisa kunye nokuthumela imeyile ngqo. Le infographic, Ukuthengiswa kweB2B kutshintshile, Siza kukubonisa ukuba kutheni abathengisi abakhaliphileyo betshintsha indawo yokuthengisa kunye nezicwangciso zentengiso ngendlela engenayo. Kufuneka uvelise ngakumbi izikhokelo kwaye ekugqibeleni ungeniso oluninzi, kwaye le infographic iya kukukhomba kwizixhobo ezinokubuyisela kumkhondo. Ukusuka kuMgangatho oPhezulu woLuntu.
Abanye abantu bangathanda ukufaka i-inbound engena endaweni yokuthengisa okuphumayo. Andikholelwa ukuba luthelekiso olusemthethweni olo. Ngapha koko, ndiyakholelwa kwindibaniselwano yomzamo ongenayo nophumayo owandisa amathuba akho okuvala ngokufanelekileyo. Umxholo unesiphelo sobomi obukhulu kunye ne-infographic okanye i-whitepaper inokuqhuba ukukhokelela iminyaka, yenza ukuba iqela lakho elithengisayo liphume lijolise ekwakheni ubudlelwane nasekuvalweni kwentengiso kunokuba umane usazisa ngethemba.
tags: Uhambo lwabathengi b2bUkuthengisa kwe-b2bb2b isigqibo sokuthengab2b uphandob2b ukuthengisauhambo lwabathengiisigqibo sokuthenga
Ayinguwe wedwa ojijisanayo nohlalutyo